सार्वजनिक यातायातमा खाेेेइ भौतिक दूरी? – Health Post Nepal
सार्वजनिक यातायातमा खाेेेइ भौतिक दूरी?
२०७७ असोज २२ गते १०:२०
काठमाडौं उपत्यकामा चल्ने सार्वजनिक सवारीसाधानहरुमा कोरोना भाइरसबाट बच्न सतर्कता नअपनाइएको देखिएको छ।
सार्वजनिक सवारीमा स्वास्थ्य सुरक्षाका कुनै मापदण्ड पालना भएका छैनन्।
अफिस जाने समयमा सार्वजनिक यातायात चढ्ने बेला त नेपालमा कोरोना भन्ने रोग नै छैन् जस्तो आभाश हुन्छ।
पहिलो चरणको लकडाउन सकेपछि थोरै भए पनि सबैले मापदण्डअनुसार स्यानिटाइजर झुड्याएको, सह–चालकले मास्क र पञ्जा लगाएको देखिन्थ्यो।
तर, आजभोली संक्रमितको सख्या झनझन् बढिरहेको बेलामा न गाडिमा न स्यानिटाइजर छ, न सह–चाहकले मुखमा मास्क नै। यदि मास्क लगाए पनि नाकमुख छोप्ने नभइ चिउँडोमा लगाएको देखिन्छ।
साथै बसमा पनि दूरी कायम गरि बस्नको लागि एक सिटमा एकजना मात्र राख्नुपर्ने मापदण्डमा छ। तर, कमाइ नहुने भन्दै सवारीचालकले त्यो पनि मानिरहेका छैनन्।
कोही यात्रु नभएका बेला मात्रै मापदण्ड पालना गर्नेजस्तो देखिन्छ, तर जब गन्तव्यतर्फ सवारी अघि बढ्छ त्यसपछि उही पुरानै तरिकाले मान्छे कोच्दै जान्छन्।
सुरुसुरुमा प्रहरीले त्यसको निगरानी गर्ने गरे पनि अहिले त कोरोना नै छैन भनेझै पुरै सवारीभरी उभ्याएर पनि मान्छे कोचिएको हुन्छ। चोकमा बसेका ट्राफिक हेरेका हेर्यै हुन्छन्।
गाडीमा चढ्ने यात्रुले नियमको पालना गर्न खोज्दा पनि सवारी चालकले कमाइ नभए भोको भइने भन्दै यात्रुलाई उल्टै हपार्छन्। एकजना यात्रुले आफू बसेको सिटमा अरुलाई नबस्न आग्रह गर्दा कुनै अपराध गरेजस्तो गरी आखाँ तरेको बताए।
सर्वसाधारणहरु कोही सचेत भएर मापदण्ड पालना गर्न र गराउन खोज्दा नराम्रो दृष्टिले हेर्ने यात्रुको गुनासो छ। एउटा सिटमा एकजना मात्रै बसेपछि सवारीचालकले दोब्बर भाडा अशुल्ने भन्दै थर्काउँछन्।
‘भाडा बढी लिने यात्रु नि प्याक राख्ने अनि पैसा चाहि दोब्ब्र लिने, अरु मापदण्ड चाही याद नहुने अनि आफूले पैसा लिन पाउने मापदण्ड चाही पुरा गर्ने?’, यात्रुहरु भन्छन् ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले भने यातायातको कारबाही गर्ने जिम्मा ट्राफिक प्रहरी र यातायात विभागलाई दिएको बताए। बुढा भन्छन्, ‘अहिले पनि मास्क नलगाउने, स्यानिटाइजर, दुरी कायम नगर्ने छन् र?’
महानगरीय ट्राफिक परिसर कार्यालयका प्रवक्ता एसपी रामेश्वरप्रसाद यादवले दिनदनै मापदण्ड पूरा नगर्ने सवारी साधनलाई कारबाही गर्दै आएको बताए।
यादवले दिनदिनै एकहजार पाँचसय देखिदुई हजारसम्म सार्वजनिक र पाइभेट दुबै गाडीहरु कारबाहीमा पर्दै आएको जानकारी दिए। उनले यति गर्दागर्दै पनि कोही सरकारले गरेको मापदण्ड उल्लघन गरी काम गरेको देखिएमा सर्वसाधारणले १०३ मा डायल गरेर गुनासो गर्न अनुरोध गरे।
सर्वसाधारण यात्रुहरु पनि मापदण्ड पालना नगरेको देखेर पनि हामीलाई खवर गर्दैनन्। मुख्य–मुख्य ठाउँबाहेक अरु ठाउँमा ट्राफिक प्रहरी परिचालन गर्न सकेको छैन’, उनले भने।
जनशक्ति भएको भए एउटा गाडीमा एकजना ट्राफिक प्रहरी परिचालन गर्न पाए यस्तो समस्या नदोहोरिने बताए। ‘यस्तो नगरेसम्म नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुन्छ’ उनले भने।
उनले विद्यार्थी तथा बृद्धाहरुको छुट पनि पाउनुपर्ने नियम रहेको बताए। तर यतिबेला सवारीधनीले कोरोनाभन्दै सबैलाई एकैनासको भाडा असुलिरहेको उनले नै बताए। गाडीमा दुइटै सिटमा यात्रुहरु राखेर खण्डमा, छुट नदिएको, स्यानिटाइजर नराखेको, ग्लब्स (पञ्जा) र मास्क नलगाएको देखेमा खबर गर्न उनको अनुरोध छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनले दिएको मापदण्ड पूरा गर्नु भनेर हरेक दिनको कोरोना ब्रिफिङमा भनिरहेकै छ। तर, नागरिकहरु जानकारी भएर पनि बुझ पचाएजस्तो व्यवहार देखाउँछन्। सार्वजनिक स्थल, यातायात, पसलहरुले मापदण्डअनुसार सुरक्षा अपनाएको देखिँदैन।